WR EFT Hack ats Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - i-Gamepron
WR EFT likaHack yilelo elaligqokwe
Kunzima ukuthola i-Escape ethembekile evela kuTarkov cheat, ikakhulukazi eyodwa efaka lezi zici eziningi. Zenzele umusa futhi ujoyine i-GamePron namuhla.
Thola ukufinyelela kunethiwekhi ye-hack ekhula ngokushesha kunazo zonke etholakala ku-inthanethi - Thenga ukhiye womkhiqizo wosuku olungu-1 namuhla!
Ezinye ziyaxaka, bese kuthi ezinye zibuse - Thenga ukhiye womkhiqizo weviki elingu-1 namhlanje
Kungani ungafuni ukuzibophezela ezindleleni zokugenca? Thenga ukhiye womkhiqizo wenyanga engu-1 namuhla!
Lapho usuthenge ukhiye womkhiqizo, uzobona ukuthi kungani abasebenzisi bethu abaningi be-GamePron bekhuluma ngokukhohlisa kwe-EFT WR.
Imininingwane EFT WR Hack
Ukubalekela iTarkov akuwona umdlalo ozokuvumela ukuthi ungene futhi uphumelele ngokushesha ngaphandle kokuthi uthole "usizo" oluncane ongabuyela kulo. Ukusebenzisa i-EFT WR hack yethu akuzukuqinisekisa nje ukuthi uzophumelela, kodwa futhi kuyithuluzi elilula kakhulu ongalisebenzisa. Yenzelwe iWindows 10, lokhu kubaleka kweTarkov kungena ngesiNgisi futhi kusekela ama-Intel / AMD CPUs. Ayizi ne-spoofer ye-HWID, kepha ungahlala uyithenga eyodwa (ngenani elengeziwe) kithi lapha eGamePron. Zonke izici ozidingayo ku-Escape from Tarkov hack akuvamile lokhu kulula ukuzithola!
I-hack yethu ye-EFT WR inikeza izinketho ze-Enemy ESP, kanye ne-EFT Aimbot ebandakanya i-FOV Circle ne-Smooth Aiming. I-Radar, i-Night / Thermal Vision, noma imodi ye-No Visor nayo ingatholakala kulokhu kukopela.
Isitha ESP (ithambo)
Ulwazi Lwesitha (igama, impilo, ukuhlola iqembu, izinga, i-pmc, amabhomu)
Mayelana ne-EFT WR
Ukukopela ngeke kukudide noma ngasiphi isikhathi, njengoba uzoba njalo lapho uzama ukufaka amanye ama-hacks e-EFT. Konke okudingeka ukwenze ukubhalisa kulayishi bese ulandela ibhukwana lemiyalelo “Lokusetshenziswa Kanjani” eliza nokukopela! Kubuye kube ukusakazwa kobufakazi, ngakho-ke ungathatha ngisho namathalente akho uwasebenzise ekusakazeni bukhoma njengeTwitch futhi ubonise abantu ukuthi ungubani ngempela. Ungakhathazeki, ngeke bakwazi ukubona ama-hacks! Ungajabulela futhi imidlalo yakho ngemodi yesikrini esigcwele ngenkathi usebenzisa i-EFT WR hack.
Kungani usebenzisa i-EFT WR ngaphezulu kwabanye abahlinzeki?
Uma wake wasebenzisa abanye onjiniyela be-hack noma abahlinzeki esikhathini esedlule, mhlawumbe uyazi ukuthi kungaba kubi kangakanani ukubhekana nabo. Asigcini ngokunikela ngensizakalo yobungcweti lapha, kepha sihlala sizama ukuthuthukisa ama-hacks ethu. Ukuvuselelwa okuqhubekayo nokwakhiwa kwamathuluzi wemidlalo ezinye izinkampani ezingeke zikhathaze ngakho yikho okusenza sithandwe kangaka! Uma ubufuna i-Escape esezingeni eliphakeme kusuka kuma-hacks we-Tarkov ngaphandle "kwamafutha", ubatholile. Amathuluzi ethu aphephe ngo-100% futhi azokugcina ufihliwe kusuka kwinsizakalo yokuthola ukukopela okuzenzakalelayo, ngakho-ke asikho isidingo sabasebenzisi beGamePron sokukhathazeka ngokuvinjelwa.
Kungenzeka wake wezwa igama elithi "ukuguqula" esikhathini esithile esedlule, kepha kuzohlala kukhona isigebengu esisha esingazi ukuthi kusho ukuthini lokho. Imenyu engaphakathi komdlalo efakwe ngaphakathi kwe-hack yethu ye-EFT WR ikuvumela ukuthi ulungise amasethingi wokugenca noma kunini lapho ungathanda, okungenakushiwo ngamanye ama-Escape athandwayo avela eTarkov aphambe atholakala ku-inthanethi. Ukulungisa ukuthi i-aimbot yakho iphendula ngokushesha kangakanani ezitheni kulula, futhi ungalungisa nosayizi we-FOV Circle yakho ngakho-ke ikhomba izitha ezimbalwa. Awufuni ngaso sonke isikhathi ukuthi izilungiselelo zakho zimpontshelwe phezulu, futhi singasiza ukufeza lezo zilungiselelo.
Abanye abahlinzeki bokukopela kungenzeka bakhiphe amathuluzi angakalungele ngisho nemakethe. Ku-GamePron, uzoba nokufinyelela kokukhohlisa okuthembekile kwe-EFT! Thenga ukhiye womkhiqizo namuhla ukuze uqalise.
Ilungele Yengamela nge EFT WR Hack yethu?